🖼️ Ụlọ ihe ngosi nka & ihe ngosi | Gaa na Hultsfred
Site na iwu niile nke nka!
Mgbe ị chọrọ ịmatakwu, a nleta otu n'ime anyị ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ngosi ka nwere ike gị ịmata. Odi ihe ohuru ohuru imuta!
Irslọ ihe ngosi nka nke ụlọ ọrụ Virserum
Ụlọ ihe ngosi nka bụ ihe ngosi nka dị ndụ. Ụlọ ihe ngosi nka bụ nnomi nke ụlọ ọrụ arịa ụlọ sitere na 1920. A na-eji eriri belt na-ebugharị ígwè ochie ndị ahụ ma na-achụpụ ahịrị ndị dị n'elu ụlọ
Telesuse nke Virserums
Site n'akụkọ ihe mere eme na-eme n'ọdịnihu. Understand ghọtara na mmepe ngwa ngwa, ọ bụghị opekata mpe mgbe ị ga - agbaso mmepe nke ekwentị mkpanaka site na afọ 1950 ruo nke anyị
N'etiti oke ohia nke Småland bụ obere obodo Virserum nwere nnukwu ụlọ ọrụ nka. Na ebe ngosi nke 1600 sqm, a na-egosi nka nke oge a na ihe ngosi banyere
Carburetor, crankshafts na piston dị ka anya pụrụ ịhụ! N'ebe ngosi nka nke moto Målilla, enwere igwe igwe di iche iche 100 na igwe osote uzo a ga-ele anya. Nke mbụ engine
Ọganihu ahụ sitere na mmalite narị afọ nke 1900. Nke a bụ naanị nnomi Dunberg-Pettersson mara amara. Ewubere ogbako a n'afọ 1905. O dochiri onye omekome ochie na ulo akwukwo
Ihe ngosi atọ banyere Hultsfred na 1950s
Ultslọ ihe ngosi nka nke Hultsfreds-Hus
Hultsfred nwere ogologo oge site na nrụpụta ụlọ. Ultslọ ihe ngosi nka nke Hultsfreds-Hus gosipụtara ụdị ụlọ, katalọgụ ụlọ, foto na eserese. Ọzọkwa ihe na-akọ banyere Hultsfreds-Hus akụkọ ihe mere eme. Mgbe ole